Emulator PS4 tsara indrindra ho an'ny Windows PC (2020) - Softwares
Mikasa ny hahazo PS4 fa tsy manana teti-bola amin'izany, fa manana PC ianao?Avy eo aza manahy aorian'ny fikarohana mahery vaika fa nahita lisitry ny emulator PS4 tsara indrindra azonao andalovana ianao ary misintona iray ho anao hahafahanao mankafy ny lohatenin'ny Play Station amin'ny PC-nao.
Ka omeo vakiana feno ity lahatsoratra ity hahafantarana hoe iza ny emulator PS4 no tsara indrindra.
Lisitry ny Emulator PS4 tsara indrindra ho an'ny PC - Emulateur Proof Future
Hitanao ho avy ity iray ity. PS4 no emulator malaza indrindra sy be mpampiasa indrindra noho ny sehatra matanjaka sy ny fiasa omeny.PS4 Emus dia manana mpizara mifandraika amin'ny Internet izay mampiantrano lalao amin'ny Internet amin'ny PS4. Azonao atao koa ny mahazo ireo lalao ireo amin'ny rafitrao sy milalao azy ireo amin'ny Internet.
Ny PS4 Emus koa dia manana mpifanerasera be mpampiasa izay mamela anao hahita ny rafitra BIOS anao nefa tsy hiditra ao anaty toerana mandroso. Ianao koa dia hahazo safidy hanao fanovana sy fanovana vitsivitsy amin'ny emulator anao arakaraka ny safidinao. PS4 Emus dia misy ho an'ny mpampiasa Windows, Mac, iOS, ary Android. Azonao atao ny misintona ny PS4 Emus amin'ny fipihana Eto .
Sehatra tsy miankina.
Fandraisana mifankahalala amin'ny mpampiasa.
Manohana lalao maro.
Tsy dia mitadidy fahatsiarovana solosaina intsony.
Tsy manohana ny PlayStation Network.
Manaraka eo amin'ny lisitra, manana Orbital PS4 Emulator izahay. Ny orbital PS4 emulator rindrambaiko miorina amin'ny virtualization ambany izay haka tahaka ny rafitra fiasa PS4 console amin'ny PC-nao. PS4 emulator dia mila farafahakeliny RAM 16GB farafaharatsiny amin'ny PC anao ary miasa amin'ny PC ihany no manana fikirakirana avo. Ity simulator ity dia eo an-dàlam-pandrosoana ataon'ny mpamorona ary mety tsy manohana lohateny kilalao ara-barotra sasany amin'ny Play Station Store.
Ny emulator PS4 orbital dia azo ampiasaina amin'ny Windows sy LINUX ihany. Fa raha hampiasa an'io dia tsy maintsy manangana ireo singa telo dia ny BIOS, GRUB, QEMU ianao irery. Azonao atao ny misintona ny kaody loharano amin'ny fipihana Eto .
Windows sy Linux mifanaraka.
Mbola eo an-dàlam-pandrosoana.
Mila fanaingoana avo mba hihazakazahana.
PCSX4 no emulator PS4 vaovao sy vao manomboka izay miakatra eo amin'ny tsena. PCSX4 Malalaka hampiasa programa izay hanahaka ny lalao PS4 amin'ny birao. Ny PCSX4 dia mampiasa Vulkan, OpenGL, And direct x 12 ao aoriany ho an'ny famoahana faran'izay betsaka ny fampisehoana amin'ny resaka lalao.
Ny PCSX4 Ilaiko koa ny PC avo lenta izay misy 12 GB RAM sy processeur 4 core, ary rafitra miasa 64 bit Windows. Miaraka amin'ny fisintomana mihoatra ny 350.000+ PCSX4 mbola ao anatin'ny dingana beta ary mety hahazo bibikely sy hadisoana ianao amin'ny fampiasana azy. Azonao atao ny misintona an'ity emulator ity amin'ny fipihana Eto .
Vehivavy mpitondratena sy Mac mifanentana.
Tsy manohana lalao piraty.
Tsy manohana OS 32-bit Windows.
Ny emulator PS4 EMX dia novolavolaina tamin'ny taona 2014 avy amin'ny mpamorona ekipa solika. Hatramin'io fotoana io PS4 EMX eo am-pamolavolana ary miasa ny ekipa, amin'ny sehatr'asa mpampiasa sary ho an'ny Windows. Ny filazan'ny PS4 EMX dia manome ny fahombiazana tsara indrindra amin'ny filalaovana lalao raha manana fikirakirana PC avo lenta ianao izay misy ny processeur farany indrindra, Minimum 6 GB RAM, ary GPU voatokana.
Ny serivisy PS4 EMX dia antenaina hanomboka tsy ho ela. Azonao atao ny misintona an'ity emulator ity amin'ny fipihana Eto .
Maimaim-poana misintona sy mametraka.
Azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa Windows ihany.
Eny, ity no lahatsoratray fohy tamin'ny emulator PS4 Best. Raha tianao ny lahatsoratra ary mikasa ny hisintona ho anao ianao dia ampahafantaro anay izay emulator alefanao ao anaty boaty fanehoan-kevitra etsy ambany, ary raha manana sosokevitra na fanontaniana momba an'io ianao dia avelao izy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Emulator Android tsara indrindra
Azo antoka ve ny fampiasana Bluestacks?
Gabby's Dollhouse Season 2: Ankafizin'ny Ankizy
fampiharana Alexa ho an'ny pc download
xbox kaody fanavotana maimaim-poana
youtube hiova ho mp3 maimaim-poana
kaody xbox fitsapana mivantana tsy mandeha
sarimihetsika maimaim-poana amin'ny aterineto maimaim-poana HD kalitao To Watch